ओलि प्रवृत्ति प्रतिक्रियावादी चरित्रको उपज - ढोरपाटन पोष्ट
२०७८ असार ३०, बुधबार ०६:१०
संविधानको दायरा नाघेर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट स्वेच्छाचारी ढंगले गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले सच्याएको छ। अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशसमेत जारी गरेको छ। संविधान र आफ्नो अघिल्लो फैसलाको समेत प्रतिकूल भएको भन्दै अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरेको हो। असार २९ गते अपराह्नसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न र आगामी साउन ३ गतेभित्र प्रतिनिधिसभा अधिवेशन डाक्नसमेत जारी आदेशले उल्लेख गरेको छ।
आज हाम्रो देशको संशोधनवाद नाङ्गो दलाल पुँजीवादमा गिर्ने क्रम बढिरहेको छ। ओलि आज त्यहीँ भुमिकामा छ्न्। ओलिले आफू सत्तामा रहनकै लागि आफुमा विकसित भएको प्रतिक्रियावादी चरीत्रको नाङ्गो प्रदर्शन गरेका छन्। त्यो असंवैधानिक तवरले प्रतिनिधि सभाको विघटनको रूपमा दुइ दुई पटक अभिव्यक्त भएको छ। अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई ‘संवैधानिक नैतिकताबाट च्युत’ भनेको छ। बारम्बार प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई ‘सदाशयतापूर्वक गरिएको काम भन्न नसकिने’ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीबाट लोकतन्त्रमाथि धोकाधडी भएको ठहरसमेत गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापन मात्रै गरेको छैन, देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको छ। अझ देउवालाई समर्थन गरेकै कारणबाट सांसदहरूलाई ह्वीप उल्लंघन वा दल त्यागको कारबाही नचलाउनसमेत आदेश जारी भएको छ।
२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा वाम गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै ओलीले, ‘बहुमत पाए राजनीतिक स्थिरता कायम गर्छौं, विकास र समृद्धिको मूल फुटाउँछौं। राजनीतिक क्रान्ति पुरा भइसक्यो अब आर्थिक क्रान्ति सम्पन्न गर्छौं। देशलाई समाजवादउन्मुख बनाउछौं। आदि इत्यादि’ जस्ता झुठो प्रतिबद्धता गरेका थिए। त्यो झुठो नारालाई जनताले मात्रै पत्याएनन् कतिपय अन्य क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले समेत पत्याए, नभन्दै जनताले उनको गठबन्धनलाई भारी बहुमत दिएका थिए। ओलि अलि अस्तिसम्म सबैका हाइ हाइ थिए, तर यो संसदीय खेल र प्रतिक्रियावादी व्यवस्थामा आन्तरिक रूपमा ओलिको प्रतिक्रियावादी चरीत्रको उपजको रूपमा ओलि प्रवृत्ति हुर्कदै गएको कसैले देखेनन्। उतिबेलादेखि नै ओलिको अवसरवादी र दक्षिणपन्थी राजनीतिक लाइन प्रतिक्रियावादी चिन्तनमा नराम्रोसँग विकसित भइरहेको थियो। हामीले त्यो कुरा मसालको आठौं महाधिवेशनको प्रस्तावित दस्तावेजमा स्पष्टताको साथ उल्लेख गरेका थियौं यद्यपि त्यो दस्तावेज पास हुन सकेन।
बहुमतको आधारमा २०७४ फागुन ३ मा सत्ताको नेतृत्व सम्हालेका ओली आफ्नै प्रतिक्रियावादी दम्भ र स्वेच्छाचारिताको परिणामस्वरूप आज सडकमा आइपुगेका छन्। र अर्को झन् ठुलो प्रतिक्रियावादी शक्ति पुनः सत्तामा जाने वातावरण बनेको छ। संसदीय व्यवस्थामा स्थिरताको चर्को नारा लगाएर जनमत बटुल्दै सत्ताको भर्‍याङ चढेका ओली साढे तीन वर्षमा त्यही भर्‍याङबाट बल्ड्याङ खाँदै सडकमा आइपुग्नुमा एक, दुईमात्र होइन, दर्जनौं घटना जोडिएका छन्।
२०७२ सालमा पहिलोपटक ९ महिना प्रधानमन्त्री बन्दा ओलीको राजनीतिक उचाइ बढेको थियो। संविधान जारी गरेपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीको उनले डटेर सामना गरेका थिए । त्यही बेला पाएको सहानुभूति २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा ओलीका लागि शक्ति आर्जन गर्ने अस्त्र बन्यो तर त्यसरी आर्जित शक्तिको मान र मर्यादा गर्ने दृष्टिकोण उनको प्रतिक्रियावादी चरीत्रको कारण गुमाइ सकेका थिए। उनले आफुलाई मात्रै सर्वसत्तावादी ठान्ने प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण पालेका थिए। जसका कारण यतिखेर उनको हातबाट सत्ता मात्रै गुमेको छैन शक्तिशाली र ठूलो जनाधार भएको उनको पार्टीसमेत छिन्नभिन्न भएको छ।
प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले वाम गठबन्धनलाई मिलाएर पार्टी एकता गरे। पार्टी एकता गर्दा माओवादी केन्द्रसँग उनले सैद्धान्तिकभन्दा बढी राजनीतिक लाभहानि र भागबन्डाको हिसाबकिताब गरेका थिए। त्यही हिसाबभित्र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसँग आधा-आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बाँडफाँट गरेर चलाउने सहमति पनि भएको थियो। जुन दिनदेखि त्यो सहमति कार्यान्वयनमा आशंका बढ्न थाल्यो, त्यसपछि ओली र दाहालबीच खटपट बढ्यो। २०७५ जेठ १४ मा उपेन्द्र यादव ओली सरकारमा सहभागी भएपछि विधिवत रूपमा ओलीको नेतृत्वमा दुई तिहाइ जनमतको सरकार बनेको थियो। इतिहास पल्टाउने हो भने २०१५ सालमा बीपी कोइरालाको सरकारपछि पहिलोपल्ट यति धेरै जनमत बोकेको सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर ओलीलाई मिलेको थियो तर उनले जनमत र अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेनन्।
देश र जनताको निम्ति सकेजति काम गर्ने मनसाय भएको भए ओलीका लागि हरेक मोर्चामा अनुकूलता थिए। जस्तो, उनी करिब दुई तिहाइनिकट बहुमत भएको दलका एक नम्बर अध्यक्ष थिए। संसदमा दुई तिहाइको समर्थन थियो। आफू अनुकूलका मन्त्रीहरू थिए। प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म उनका लागि अनुकूल संरचना थिए। सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा आफ्नै पार्टीका एकल सरकार थिए। ती सरकारमा ओलीनिकट नै चार जना मुख्यमन्त्री थिए। स्थानीय सरकारमा ठूला संख्यामा पार्टीबाट निर्वाचितहरू थिए। केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म काम गर्नका लागि ओलीलाई धेरै अनुकूलता थिए, तर उनले केन्द्रबाहेक अरू सरकार नै होइनन् जस्तो व्यवहार गरे। ओलीले आफ्नै शक्ति र अनुकूलता अनुसारको काम गरेनन्। आफूमा सबैलाई मिलाएर लैजाने भूमिका र जिम्मेवारी रहेको पनि ख्याल गरेनन्। बरु उनले पार्टीभित्र आफूलाई प्रश्न गर्ने नेताहरूलाई ठेगान लगाउने योजना बनाउन थाले। पार्टीको निर्णय मान्न छोडे। पार्टीभित्र अधिनायकवादी शैली अपनाए। पार्टी पुटाउन तयार भए तर सत्ता छोड्न तयार भएनन्। यो सबै उनको प्रतिक्रियावादी र सामन्ती चिन्तनको उपज थियो।
यो बीचमा ओलीले धेरै राजनीतिक कदम उठाए। केहि राम्रा काम गरेको भन्ने देखाउन प्रयत्न गरे। यसबारे नेपालको नयाँ नक्सा प्रकरणसँग सम्बन्धित रोचक प्रसङ्ग छ। नेपालको नयाँ नक्सा प्रकरणमा ओलिको खोक्रो राष्ट्रवाद कसैले देखेनन्। ओलिको खोक्रो राष्ट्रवादको साक्षी रहदै राष्ट्रघाती तथा देशद्रोही मनोवृत्तिका राजेन्द्र महतोलेसमेत नयाँ नक्सा संसदबाट पास गर्ने कुराको समर्थन गर्दै संसदमा रोषपुर्ण चर्को भाषण गरे। सरिता गिरिलाई कारबाहीको नाटक मंचन भयो। यी सबै राष्ट्रवादी गतिविधिमा सम्पुर्ण भारतीय दलालहरुसमेत एकजुट भएको देख्दा हामी त्यो ओलिको खोक्रो राष्ट्रवाद हो भन्ने कुरामा स्पष्ट थियौं। तर कतिपय क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीसमेतले त्यसलाई पत्याए, ओलिलाई शिरमा राखेर हिडे, ओलि सरकारको गलत कामको विरोध गरेकै आधारमा आफ्ना वर्षौं पुराना नेता कार्यकर्तालाई कारबाही गर्ने काम भए। राष्ट्रघाती एवं देशद्रोही राजेन्द्र महतोसमेत राष्ट्रवादी भएको वक्तव्य प्रेसित गरे। हामी उतिबेला नै प्रष्ट थियौं कि प्रतिक्रियावादीहरुले आफ्नो सत्ता राजनीतिको रोटी सेक्न जे पनि गर्छन्। ओलिको यो त्यहीँ सिलसिलामा भएको नक्कली र खोक्रो राष्ट्रवादको सहारा थियो। त्यसले आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्ने प्रयत्न गरेको थियो भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट थियौं। त्यसबेला ओलिको अनावश्यक रूपमा गुणगान गाउने र काँधमा बोक्नेहरुले यो कुरा बुझ्न किन सकेनन्? यो दुनियाँलाई थाहा छ।
जब ओलि आफू पार्टीभित्र अल्पमतमा परेपछि उनले संविधानले कल्पनै नगरेको विषयलाई अपव्याख्या गर्दै प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने बाटो पक्रिए। प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्ष कार्यकाल हुने व्यवस्था संविधानमा भए पनि उनले त्यसलाई नजर अन्दाज गर्दै गत पुस ५ मा पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा भंग गरे। सर्वोच्च अदालतले उनको त्यो निर्णयलाई बदर गर्‍यो। यही प्रकरणसँगै तत्कालीन नेकपामा फुट आयो। प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएपछि पनि ओलीले आफ्नो प्रतिक्रियावादी मिसन छाडेनन्। यही सिलसिलामा उनले गत जेठ ८ गते पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए।
संसदमा आफुले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि राजीनामा दिनुपर्नेमा उल्टै संविधानका अन्य धाराहरू प्रयोग गरेको दाबी गरेर सरकारमा लम्बिइरहन खोजे। जसलाई हिजो सर्वोच्च अदालतको आदेशले गलत सावित गरिदिएको छ। यो बीचमा ओलीले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सबै संवैधानिक निकायमा आफू अनुकूलका व्यक्तिहरूलाई प्रवेश गराए। संसदीय सुनुवाइको मान्यतालाई कहिल्यै ख्याल गरेनन्। दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा पनि ओलीले अध्यादेश जारी गरी शासन सञ्चालनको अभ्यास गरिरहे। ओलीका यस्ता कदमलाई सर्वोच्चले पटकपटक सच्यायो। सोमबारको फैसलालाई पनि त्यसैको पछिल्लो संस्करणको रूपमा बुझ्नुपर्छ। सर्बोच्चको यो फैसलासँगै ओलिको प्रतिक्रियावादी चरित्रले उत्पन्न राजनीतिक अन्यौलताको तत्कालको लागि अन्त्य भएको छ।
अब यहाँ प्रष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने के ओलि सरकार परिवर्तनसँगै नेपाली राजनीतिका सम्पुर्ण अस्थिरता र अन्यौलताको स्थायी रूपमा अन्त्य हुनेछ? हुनेछैन। यदि देशमा प्रतिगामी खतरा थियो वा छ भने त्यो अदालतको फैसलाले सच्चिएको र अब बन्ने सरकारले नै छु-मन्तर गरेर स्थायीत्व, दिगो विकास र अग्रगमनको बाटो तताउछ वा त्यसको लागि काम गर्छ भन्ने सोचाइ कसैलाई छ भने त्यो दक्षिणपन्थी तथा यथास्थितिवादी राजनीतिक सोचाइ हो। या त भ्रम हो। सर्बोच्च अदालतले तत्काल संवैधानिक संकटको निकास दिएपनि देशको समस्या जहाँको त्यहीँ नै छ। आज देश पुनः अस्थिरता र अन्योलताको भुमरीमा फसेको छ। देश र जनताले जुन दुख, सास्ती, पिडा, अभाव, गरिबी, शोषण, दमन आदि इत्यादि भोक्नु परेको छ त्यो ओलि सरकारको कारण मात्रै होइन, यो सबै संसदीय प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाको कारण देश र जनताले भोग्नुपरेको समस्या हो। दोषी पात्रहरू पनि हुन सक्छन् तर निर्णायक रूपमा दोषी व्यवस्था नै हो। ओलि, देउवा, प्रचण्ड, माधव वा अन्य कोही पात्र मात्रै हुन्। सिंगो प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थाको अवधिभरि त्यस्तै प्रकारले हिजो देखि आजसम्म थुप्रै पात्रहरुले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा जनताको नाउँमा लुटेर खाँदै आएका छन् र खाँदै जानेछन्। अहिलेको सरकार परिवर्तन पछि पनि देश र जनताले जे भोग्नुपरेको छ त्यसमा सुधार कुनैपनि हालतमा हुनेछैन भन्ने कुरा गर्मी महिनाको घाम जस्तै छर्लङ्ग छ।
सत्ता बाहिर रहदासम्म राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताको पक्षमा कुरा गरेर आम नागरिक झुक्काउने र सरकारमा पुगेपछि भ्रष्टाचार गर्ने, अत्याचार गर्ने र देशको सम्पत्ति बेच्ने, राष्ट्रघाती जनघाती सन्धि सम्झौता गर्ने प्रवृत्तिलाई यही प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थाले नै हुर्काउन मलजल गरिरहेको छ। अब देउवा सत्तामा गएर आफ्नो संसदीय प्रतिक्रियावादी चरीत्र अनुसारको काम नै हुने प्रष्ट छ। देउवाले झन् यो देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताविरुद्ध नै दीर्घकालीन असर पर्ने काम गर्न सक्ने आधारहरु प्रशस्त देख्न सकिन्छ। देउवा र उनको पार्टीको वर्ग चरीत्रको विश्लेषणले यही कुरा औल्याइरहेछ। हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएका छौं कि ओलि सरकारको असंवैधानिक, स्वैच्छाचारी, अधिनायकवादी, राष्ट्रघाती तथा मनोमानी कदमहरु रोक्न उनलाई सरकारबाट च्युत गर्नैपर्छ। र तत्काल सरकारको नेतृत्व कुनै देशभक्त तथा वामपन्थी व्यक्तित्वको नेतृत्वमा नै हुनुपर्छ। परिस्थितिले यदी त्यो संभावना छैन भने अन्य प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले देश झन्झन् भड्खाल्डोमा हाल्ने निश्चित छ। आज देउवा नेतृत्वमा सरकार बनिरहेको छ, यसमा हामी के प्रष्ट हुनुपर्छ भने देउवाले ओलिको गलत कदमको विरोध गर्नु सकारात्मक छ तर स्वयं देउवाले त्यो विरोध आफू सरकारमा गएर उस्तै प्रकारको ब्रम्हलुट र राष्ट्रघात गर्न गरेका हुन् वा सच्चिएर देशको निस्वार्थ सेवा गर्न? हामी सहजै दाबी गर्न सक्छौ कि देउवा सरकारले समेत देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने देखिदैन। जनताले यो सरकारलाई समेत समर्थन र विश्वास गर्ने आधार छैन।
आज क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट शक्ति कमजोर भएकै कारण सामन्त, दलाल तथा नोकरशाहीहरुले आलोपालो देश र जनताको रगत चुसिरहेका छन्। अब क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट शक्तिको एकताको आवश्यकता रहेको छ। दक्षिणपन्थी र प्रतिक्रियावादीलाई जनता सामु नांगेझार पार्न प्रचारात्मक आन्दोलनको खाचो छ। साथै यो संसदीय प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाले देश र जनताका आम समस्याको सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्ने कुरा बुझाउदै क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्निर्माण, एकता, सुदृढीकरण र अग्रगामी दिशाको रोडम्यापबारे महान बहस हुन जरुरी देखिन्छ।
व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहज वातावरण बनाउन। उद्योग संघको आग्रह